Caalamka, 08 September 2019
Axad 8 September 2019
Boris Johnson oo guul-darro kale ay ku dhacday
Aqalka Sare ee Britain ayaa maanta ansixiyey sharci ku qasbaya Boris Johnson inuu dib u dhigo ka bixitaanka Britain ee Midowga Yurub, taasi oo dhabar-jab cusub ku ah ra’iisul wasaaraha.
Guul-darro kale oo asiibtay Boris Johnson
Ra’iisul wasaaraha Britain, Boris Johnson ayaa mar kale maanta waxaa asiibay guul-darro culus kadib markii walaakiis uu ku dhowaaqay inuu iska casilay xil wasiir ku-xigeen iyo xubinnimadii baarlamanka.
Johnson oo ku baaqay doorasho deg deg ah
Ra’iisul wasaaraha Britain, Boris Johnson ayaa dalbaday doorasho baarlaman oo waqtigeda laga soo hormariyo, taasi oo dhici doonta 15-ka October.
Rouhani oo laba bil u qabtay dalalka Yurub
Madaxweynaha Iran, Hassan Rouhani ayaa maanta laba bilood siiyey dalalka Yurub si ay u bad-baadiyaan heshiiskii 2015-kii laga gaaray Nukliyeerka dalkiisa.
Rouhani: Wada-hadal la geli mayno Mareykanka
Madaxweynaha Iran, Hassan Rouhani ayaa maanta sheegay in dalkiisa uusan wada-hadallo laba dhinac ah la yeelan doonin Mareykanka.